Milan Bergamo Airport line-up busy 2017/18 ririnina vanim-potoana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Milan Bergamo Airport line-up busy 2017/18 ririnina vanim-potoana
Ny seranam-piaramanidina Milan Bergamo dia kasaina handray ny vanin-taona ririnina 2017/18 miaraka amin'ny zotra vaovao
Milan Bergamo dia vonona handray ny ririnina miaraka amina zotra vaovao maromaro ary hiakatra bebe kokoa amin'ny tambajotran'ny zotra mandritra ny fandaharam-potoana W17 / 18. Mialoha ny fanombohan'ny vanim-potoana ny seranam-piaramanidina dia efa nankasitraka ny serivisy indroa isan-kerinandro nataon'i Ernest Airlines tany Lviv tamin'ny 20 Oktobra. Taty aoriana amin'ity ririnina ity dia hampiitatra bebe kokoa ny tambajotra Okrainiana Milan Bergamo ny mpitatitra vola any Italia amin'ny alàlan'ny fandefasana ny rohy indroa isan-kerinandro mankany Kiev Zhulyany amin'ny 9 Desambra, miaraka amin'ny rohy miakatra intelo isan-kerinandro mandritra ny vanim-potoanan'ny fety.
Ryanair dia manohy ny zotram-piaramanidina mavitrika ary tsy mitsaha-mitombo ao Milan Bergamo, manomboka serivisy telo amin'ny andro iray ihany. Ity alahady 29 oktobra ity dia hahita ny seranam-piaramanidina handray ireo rohy vaovao an'ny mpitatitra vola lafo vidy indrindra mankany Eilat Ovda, Tel Aviv ary Plovdiv - ny zotram-piaramanidina izao dia manolotra zotra 84 avy amin'ny vavahady Lombardy.
Milan Bergamo koa dia miaina fitomboan'ny matetika amin'ny zotra mahomby maro:
• Ny rohin'i Pobeda amin'i Moskoa Vnukovo dia mandeha isan'andro ka hatramin'ny sivy isan-kerinandro amin'ny 1 Desambra.
• Ny serivisy isan'andro an'ny Pegasus Airlines mankany Istanbul Sabiha Gökçen dia hahita fiasa roa isan-kerinandro manomboka amin'ny 15 Desambra.
• Ny rohy Blue Air's Liverpool sy Iasi dia voatery hitohy mandritra ny ririnina voalohany.
Miandrandra ny fandrosoan'ny tamba-jotra amin'ny seranam-piaramanidina, Giacomo Cattaneo, talen'ny sidina avaratry ny seranam-piaramanidina, SACBO - mpiasan'ny Milan Bergamo - dia nilaza fa: «Tsy mitsahatra ny miorina amin'ny fototra mafy orina izahay. Ireo zotram-pifandraisana sy fisondrotana matetika ireo dia mampiseho mazava fa manolo-tena hanolotra zotram-piaramanidina mitombo hatrany, toerana tsara toerana ary safidy sy fahafaha-misimisy kokoa ho an'ny mpanjifanay. ”
Mijery amin'ny fahavaratra…
Ny ririnin'i Milan Bergamo dia nandefa ny fanambarana vao haingana fa hanampy ny fifandraisana voalohany amin'ny seranam-piaramanidina Italiana ho any Kroasia mandritra ny S18 miaraka amin'ny rohy mankany Dubrovnik sy Split i Volotea. Raha manomboka làlana an-toerana fanampiny koa ianao, amin'ity indray mitoraka ity mankany Olbia, ny fahavaratra dia hahita ihany koa ny fiverenan'ireo sidina fizahana fiaramanidina mankany Lampedusa sy Pantelleria.
Hanomboka manomboka ny volana mey ho avy izao, nanamafy ny serivisy fizaran-taona indroa isan-kerinandro ho an'i Dubrovnik (28 Mey) sy Split (25 Mey) ny mpitatitra lafo Espaniôla, ary ny serivisy intelo isan-kerinandro ho an'i Olbia dia hanomboka amin'ny 26 Mey. Ny firaketana ny fitomboana 12% isan-taona amin'ny fifamoivoizan'ny mpandeha avy any amin'ny seranam-piaramanidina Lombardy, ireo làlana vaovao an'i Volotea dia hahita seza fanampiny miisa 34,000 atolotra amin'ny fahavaratra ho avy, miasa mihoatra ny 520 ny sidina mandritra ny taona 2018.
"Tena faly izahay manitatra ny toerana itodiana, avy any Milan Bergamo, indrindra ireo sidina iraisam-pirenena voalohany avy any Lombardy, mampitombo ny fisianay amin'ny seranam-piaramanidina," hoy i Valeria Rebasti, Italia County Manager Volotea.
Boeing sy Ethiopian Airlines mankalaza ny fanaterana ny Dreamliner 787-9 voalohany
Ny Eco Expo faha-12 dia hisokatra anio ao amin'ny AsiaWorld-Expo